छोराछोरीको भाइरल मुखशोथ: कारण, लक्षण, उपचार
तिनीहरूले मानव भाइरस कमै मात्र छन्। झगडा प्रतिरक्षा प्रणाली को शक्ति, अरूलाई सधैं जित्न सक्छौं बेला केही सफलता संग। संक्रामक रोग को एक प्रकारको एक भाइरल मुखशोथ छ। बच्चाहरु, यो गरिब भोक, अत्यधिक moodiness अनिद्रा देखिन्छ। यो विकृति कस्तो व्यवहार गर्न, तपाईं यो लेख सिक्न हुनेछ।
छोराछोरीको रोग को विशेषताहरु
भाइरल मुखशोथ - त्यहाँ मौखिक थियो जसमा नरम तन्तु lesion एक संक्रामक रोग विज्ञान। यो एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर प्रतिक्रिया एक प्रकारको रूपमा देखेको हुनुपर्छ। को विकार को लक्षण को उपस्थिति प्रकुपित लगभग कुनै पनि भाइरस को हुन सक्छ - इन्फ्लूएंजा, चिकन pox वा चेचक।
रोग लगभग 80% herpes संक्रमण को पृष्ठभूमिमा हुन्छ। उनको मनपर्ने स्थान ओठको स्थानीयकरण छ। भाइरल - विशेष निर्देशिका यो रोग लागि अर्को नाम पाउन सक्नुहुन्छ herpetic मुखशोथ। पहिलो स्थानमा यो निदान संग3वर्ष मुनिका बच्चाहरु मुख को कुना, र त्यसपछि सम्पूर्ण mucosa असर गर्छ। राम्रो प्रतिरक्षा यसलाई धेरै चाँडै बित्दै मुखशोथ।
एक स्वस्थ बच्चा मा, स्वच्छता को नियम पालन, संक्रमण को सम्भावना नगण्य छ। तसर्थ, जोखिम वृद्धि कि कारक को एक बच्चाहरु मा मुखशोथ को मौखिक गुहा समस्याहरू छन्। यी gingivitis, periodontal रोग, दाँत क्षय, र त्यसैले सुरुवात समावेश गर्नुहोस्।
निस्सन्देह, यो बच्चा भाइरल मुखशोथ सबै कारणहरू छन्।
रोग विकास गरिब पोषण गर्न सक्छ।
केही डाक्टर भिटामिन कमी, खनिज कमी संग रोग थप्नुभएको छ।
एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली पनि जटिलताहरू को likelihood बढ्छ।
भाइरल मुखशोथ किनभने संक्रमण पाल्तु जनावर कार्य गर्न सक्छ स्रोत रूपमा खतरनाक अझै पनि छ। त्यहाँ एक कुकुर छ भने, सानो बच्चाहरु संग नजिक सम्पर्क अनुमति छैन।
रोग संक्रामक छ?
को किंडरगार्टन बच्चाहरु मा समय समयमा बिरामी छन्। मुखशोथ एक बच्चा, नर्स सामान्यतया आमाबाबुले विश्वस्त सुरु गर्दा रोग डराउनु आवश्यक छैन भनेर। साँच्चै त यो छ?
वास्तवमा, भाइरल मुखशोथ संक्रामक। तसर्थ, pediatricians बच्चा बिरामी पनि भने, बगैचा भ्रमणमा संख्या कम गर्न सुझाव दिन्छौं। घरमा बस्न यस समयमा राम्रो। संक्रमण को रोकथाम को लागि एक बच्चा, "Tantum वर्ड" दिन सक्छन्। , को चिकित्सा समावेश छ जो बच्चाहरु को लागि प्रयोग को लागि निर्देश, पाउनुभएपछि योजना विस्तार वर्णन गर्दछ।
प्रसारण को मुख्य मार्गहरू
रोग एक भाइरल संक्रमण को विकास मा आधारित छ, किनभने मुखशोथ उपयुक्त तरिकामा प्रसारित गर्न सकिन्छ:
सम्पर्क-घरेलू (हात मिलाइ, चुम्बन, हतियार को लागि);
भाइरस सबै सतहहरु लाइभ लागि परिचित छन्। तसर्थ, मुखशोथ धेरै सजिलै बिरामी। एक किंडरगार्टन, विद्यालय, अस्पताल, किनमेल - यी सबै ठाउँहरू असुरक्षित मानिन्छ।
रोग को पहिलो manifestations
किनभने यो सजिलै फ्लू वा चिसो संग भ्रमित हुन सक्छ भाइरल मुखशोथ धेरै धूर्त रोग मानिन्छ। केही सुरुमा गल्ती किनभने एक गंभीर दुखेको घाँटी को लक्षण को एक दुखेको घाँटी लागि लैजान। pathologic प्रक्रिया ज्वरो, भोक को विकास संग।
छोराछोरीको भाइरल मुखशोथ पहिचान गर्न विशेष कठिन समय। एक वयस्क अङ्कित र के उहाँलाई गलत थियो भन्न सक्नुहुन्छ भने, त्यसपछि बच्चाहरु संग, स्थिति धेरै जटिल छ। यस रोग प्रक्रिया मसूडों संलग्न हुँदा बच्चा बस एक दाँतको दुखाइको को गुनासो सक्छ। सूचीकृत लक्षण अत्यधिक लालास्रवण थपियो भने, आमाबाबुले अलार्म ध्वनि थालेका छन्।
निम्न लक्षण भाइरस को सक्रियता पछि उत्पन्न हुन सक्छ तेस्रो दिन भर:
बुलबुले। तिनीहरूले गाला र तालु मा अवस्थित छ। प्रत्येक बबल भित्र पारदर्शी गोप्य छलफल गर्न सकिन्छ। शिक्षा को केही दिन पछि फुट्छ र खोल्न सुरु, र तिनीहरूले एक पाप्रो ढाकिएको छन् पछि।
Sores। Rashes सामान्यतया खैरो फिलिम वा कोटिंग ढाकिएको छन्। तिनीहरूलाई वरिपरि छाला अलिकति swells।
क्षरण। बच्चा रोइरहेको निरन्तर, Moody हुन्छ भनेर यस्तो मौखिक घाउ, तीव्र खुजली र बलिरहेको सँगसँगै।
पूर्ण बाल विशेषज्ञ गर्न कल बेवास्ता धेरै आमाबाबु, घर मा बच्चाहरु मा भाइरल मुखशोथ को उपचार सुरु गर्नुहोस्। यसलाई कडाई गर्न निषेध गरिएको छ। आत्म चिकित्सा (डाक्टर भेटघाट बिना) अप्रिय परिणाम हुन सक्छ।
गर्मी चालू अवधि
प्रत्येक भाइरस यो नै महसुस बनाउँछ तुरुन्तै छैन, मानव शरीर मा penetrates। उहाँले भनिन्छ के छ गर्मी चालू अवधि। समय को यो सीमित अवधि, सुरु र सीधा पहिलो लक्षण संक्रमण उपस्थिति समाप्त हुन्छ। सही गर्मी चालू अवधि को लम्बाइ निर्धारण, लगभग असम्भव छ। संक्रमण को चरण मा भाइरस को प्रकार अज्ञात छ। रोग progresses जसरी यसलाई आफ्नो पहिचान निर्धारण गर्न सम्भव हुनेछ।
धेरै नैदानिक अध्ययन स्थापित गरेको धेरै दिन (चेचक, herpes) माथि 2-3 हप्ता देखि भाइरस viriruetsya को सक्रियता समयमा। रोग को समसामयिक पत्ता लगाउने एउटा द्रुत रिकभरी लागि आशा गर्न सक्छौं। यो छोराछोरीको भाइरल मुखशोथ को उपचार रूपमा प्रारम्भिक सकेसम्म सुरु गरिएको थियो महत्त्वपूर्ण छ।
चिकित्सा को मूल सिद्धान्तहरू
जब बच्चा को मुख मा अल्सर र vesicles आफ्नो दन्त चिकित्सक देखाउनुपर्छ। उहाँले निदान पुष्टि गर्न, र यदि आवश्यक विशेषज्ञहरु पठाउन सक्नेछन्। भाइरल मुखशोथ उपचार एक व्यापक दृष्टिकोण समावेश छ।
गंभीर अवस्थामा मौखिक घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने र analgesic उपचार आवश्यक छ। एकै समयमा दुई समस्या समाधान को लागि राम्रो तयारी "Tantum वर्ड" छ। बच्चाहरु को लागि प्रयोगको लागि निर्देशन3वर्ष को उपचार को लागि यसको उपयोग सुझाव दिन्छ। एक बाल विशेषज्ञ संग परामर्श पूर्व-आवश्यक छ। घाउ-निको एजेन्ट बाट आवेदन समावेश गर्न आवश्यक उपचार को पाठ्यक्रम मा।
यो रोगी को प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो संग समानान्तर संलग्न आवश्यक पनि छ। सामान्यतया यी उद्देश्यका लागि निर्धारित immunomodulators, भिटामिन परिसर र तयारी echinacea आधारमा।
यो छोराछोरीको अलि फरक दृष्टिकोण herpetic भाइरल मुखशोथ आवश्यक छ। यो विकृति उपचार गर्न भन्दा? यस मामला मा, मुख्य प्रयासमा दाना विरुद्ध लडाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। यो गर्न, antiviral gels र क्रीम ( "Zovirax", "Acyclovir") प्रयोग गर्नुहोस्।
फेरि एक पटक यो चिकित्सा एक चिकित्सक नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। आत्म-उपचार अस्वीकार्य छ। यो धेरै अप्रिय परिणाम निम्त्याउन सक्छ। उदाहरणका लागि, अक्सर संक्रामक रोग संग आमाबाबुले बच्चा एन्टिबायोटिक, जो गरिन सक्दैन दिन थालेका छन्। Antibacterials बच्चाहरु मा भाइरल मुखशोथ हटाउन सक्षम छैनन्।
दबाइ उपचार गर्न साथै, डाक्टर अक्सर रोग विरुद्ध विभिन्न लोक उपाय सुझाव दिन्छौं। उदाहरणका लागि, कुल्ला camomile वा कैलेंडुला आधारित विशेष हर्बल चाय प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले विरोधी भडकाऊ र घाउ-निको प्रभाव छ।
अल्सर को उपचार को लागि पनि परम्परागत विधिहरू प्रयोग गर्न अनुज्ञेय छ। यस सन्दर्भमा एउटा उत्कृष्ट उपकरण को घ्यु रस वा kalanchoe छ। तपाईं बस तरल मा एक कपास swab र मुखमा क्षरण प्रक्रिया moisten गर्न आवश्यक छ।
उपचारका लागि सामान्य सिफारिसहरू
Pediatricians कडा निम्न सिफारिसहरू सुन्न आमाबाबुले सल्लाह:
छोराछोरीको भाइरल मुखशोथ एक संक्रामक रोग हुन मानिन्छ। तसर्थ, बित्तिकै बच्चा बिरामी छ, यो पृथक गर्नुपर्छ। उहाँले छुट्टै भाँडा हुनुपर्छ। परिवार केही बच्चाहरु भने, आमाबाबुले आफ्नो खिलौने कसैले छोयो भनेर पक्का गर्नुपर्छ।
चिकित्सा समयमा, बच्चा को मौखिक स्वास्थ्य विशेष ध्यान दिनुपर्छ। प्रत्येक बच्चा खाना पछि आफ्नो मुख कुल्ला गर्न accustom गर्न आवश्यक छ। प्रक्रिया को लागि साधारण पानी र decoctions दुवै लागि उपयुक्त छ।
अन्तिम रिकभरी पछि crumbs नयाँ टूथब्रश किन्न आवश्यक छ।
यस नवजात बिरामी छ भने, यो राम्ररी प्रत्येक lactation महिला अघि स्तन धुन सिफारिस गरिएको छ।
यो बिरामीको आहार ध्यान आवश्यक छ। रुचि उज्यालो खाना दिन राम्रो छ।
भाइरल छोराछोरीको मुखशोथ, लक्षण माथि विस्तृत वर्णन जुन को, राम्रो उपचार प्रतिक्रिया। मुख को श्लेम लाग्एको झिल्ली चाँडै पुनःस्थापित। पुन संक्रमण जोगिन, तुरुन्तै पुन: पछि, तपाईं ब्रश र संक्रमण रहन सक्छ जो निपल, फेंक टाढा गर्न आवश्यक छ।
छोराछोरीको भाइरल मुखशोथ अक्सर कमजोर प्रतिरक्षा कारण छ। यसलाई रोकथाम को सरल नियमहरू पालन गर्न त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ:
यसलाई दन्त चिकित्सक यसलाई देखाउन वर्ष कम्तिमा एक पटक बच्चाको दाँत अवस्था अनुगमन गर्न आवश्यक छ।
यसलाई (सख्त, भिटामिन) को संक्रमण मुख्यतः बच्चाहरु कमजोर असर किनभने समय समयमा प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन गतिविधिहरु पूरा गर्न आवश्यक छ।
आमाबाबुले निरन्तर बच्चाको आहार निगरानी गर्नुपर्छ।
यी सरल नियमहरू अनुपालन भाइरल मुखशोथ को संक्रमण रोक्छ।
Apical periodontitis: लक्षण, निदान, उपचार
Pulpit - यो के हो र कसरी यो उपचार गर्न?
Parodont - यो के हो? periodontal रोग
दाँत र गिजा को रोगहरु को रोकथाम लागि दन्त prophylaxis
कविता AT Tvardovsky "Vasily Terkin"। Vasiliya Terkina को छवि
अधिकारीहरु प्रशासक निर्देशन: विशेषताहरू
पूल "कक्षा", साइकेटिभकर: काम तालिका, सेवाहरूको सूची कसरी प्राप्त गर्न कहाँ
संसारमा सबै भन्दा ठूलो र सबै भन्दा चरम रोलर कोस्टर
सबैभन्दा अप्रत्याशित विवाह वा पावलले हुनेछ पत्नी को नाम?
Vityazevo सहज होटल पर्यटकहरु पर्खिरहेका
Zhyuli Lyudovik: फ्रान्सेली फुटबल खेलाडी को एक जीवनी
"सद्भाव" - नयाँ पीढीको रेडिएटर